Zodiac sinoa ho an'ny ankizy | Mianara momba ny sinoa ilay toetra maha-olona sy toetran'ny Zodiaka! - Famantarana Zodiac
Zodiac sinoa ho an'ny ankizy
Ny famantarana ny Zodiaka sinoa zanakao dia afaka manampy amin'ny famahana ny zava-miafina manodidina ny toetrany, ny toetrany ary ny toetrany. Ny fahalalana ny biby Zodiaka sinoa zanakao dia manome tabilao kintana izay ahafahanao manampy azy ireo hitety ny fisondrotana sy ny faran'ny fiainana. Ny zavatra ho hitanao momba ny 'izay' ilain'ny zanakao, ny filany, ny nofinofisiny, ny tsy tiany ary ny tiany dia afaka manome anao fitaovana ho an'ny fitaizam-panahy bebe kokoa azonao ampiasaina hanohanana, hanamafisana ary hanomezana aingam-panahy ny zanakao lahy na vavy.
Ny dingana voalohany, mazava ho azy, dia ny mamantatra izay mifanaraka amin'ny Zodiac Chinese Sign amin'ny tsingerintaona nahaterahan'ny zanakao. Ny fihodinan'ny fanandroana sinoa dia hafa kely noho ny Zodiac Andrefana. Raha manana hazakazaka 12 isam-bolana ny rafitra tandrefana dia manana tsingerina 12 taona ny sinoa, samy manana ny anarany avy amin'ny biby hafa.
Ity misy topy topimaso fohy hanombohana anao:
Rat: 1996, 2008, 2020
Omby: 1997, 2009, 2021
Tigra: 1998, 2019, 2022
Bitro: 1999, 2011, 2023
Dragon: 2000, 2012, 2024
Bibilava: 2001, 2013, 2025
Soavaly: 2002, 2014, 2026
Osy: 2003, 2015, 2027
Rajako: 2004, 2016, 2028
Akoho: 2005, 2017, 2029
Alika: 2006, 2018, 2030
Kisoa: 2007, 2019, 2031
Na dia tsotra aza ity topy maso ity satria ny Astrologers sinoa dia mijery ihany koa ny volana sy ny ora nahaterahanao, izay manome halaliny bebe kokoa. Ka eritrereto ny fampahalalana eto toy ny primer izay ahafahanao manangona antsipiriany bebe kokoa rehefa mandeha ianao.
Zaza Alika Zodiaka Sinoa
Taonan'ny alika ho an'ny ankizy: ny toetran'ny alika zodiac sinoa, ny toetrany ary ny toetran'ny taonan'ny alika dia mivovo ...
Zanaky ny dragona Zodiaka Sinoa
Taonan'ny dragona ho an'ny ankizy: ny toetoetran'ny Zodiaka Zodiaka Sinoa, ny toetrany ary ny toetra mampiavaka ny ankizy sy ny olon-dehibe ...
Ankizy Soavaly Zodiaka Sinoa
Taonan'ny soavaly ho an'ny ankizy: ny toetran'ny zaza soavaly zodiac sinoa, ny toetrany ary ny toetrany mitaingina soavaly amin'ny faha-7 amin'ny ...
Zaza Monkey Zodiac Sinoa
Taonan'ny rajako ho an'ny ankizy: ny toetran'ny rajako Zodiac Shinoa, ny toetrany ary ny toetra mampiavaka azy rehefa miditra ny ...
Zodiaka omby Zodiaka Sinoa
Taonan'ny omby ho an'ny ankizy: ny toetran'ny zaza Zodiac omby, toetra maha-olona ary toetra mampiavaka azy ny omby no biby faharoa ...
Kisoa Zodiaka Sinoa na Zana-kisoa
Taonan'ny kisoa ho an'ny ankizy: ny toetoetran'ny kisoa Zodiac kisoa, ny toetrany ary ny toetrany dia heverin'ny Sinoa ny ...
Zaza bitro Zodiaka Sinoa
Taonan'ny bitro ho an'ny ankizy: ny toetran'ny zaza bitro zodiaka sinoa, toetrany ary toetra mampiavaka ilay zaza teraka tao ...
Zaza Ratsy Zodiaka Sinoa
Taonan'ny rat ho an'ny ankizy: ny toetran'ny zaza zodiaka raty, ny toetrany ary ny toetrany ny taonan'ny raty ...
Zaza Rooster Zodiaka Sinoa
Taonan'ny akoho ho an'ny ankizy: ny zanaky ny zodiaka jaza sinoa, toetra sy toetra mampiavaka ny biby sinoa ...
Zanak'ondry Zodiac Sinoa
Taonan'ny ondry ho an'ny ankizy: ny toetran'ny zanak'ondry Zodiac, ny toetrany ary ny toetran'ny taonan'ny ondry ...
Zaza Snake Zodiaka Sinoa
Taonan'ny bibilava ho an'ny ankizy: ny bibilava bibilava Zodiaka Shinoa, toetra sy toetra mampiavaka ny bibilava dia hita ao amin'ny faha-6 ...
Zaza Tigra Zodiaka Sinoa
Taona an'ny tigra ho an'ny ankizy: ny toetran'ny zaza tigra Zodiac tigra, ny toetrany ary ny toetrany ny taom-biby biby sinoa tamin'ny ...
Biby Zodiaka Sinoa 12 an'ny zaza
Zaza Ratsy / totozy Zodiaka Sinoa
Ny singa an'ny voalavo dia rano ary tonga eo ambanin'ny fanapahan'ny Yang, na Masculine Universal. Manomboka amin'ny andro iray Rat dia mampiseho hatsarana iray izay mahasarika ny rehetra. Tena zaza mamy izy ireo ary tsy misalasala maneho ny fihetseham-pony ampahibemaso.
Na dia tsara sy tsara aza izany rehetra izany, rehefa tsy maneho ny fomba nantenain'izy ireo ny fihetsika mahafatifaty nataon'i Rat, dia miomàna amin'ny tetika manaraka. Mety hitomany ny voalavo, manjary manjakazaka amin'ny biby fiompy na ankizy hafa na manjary clingy, maniry ny ounce rehetra hisarika ny sainao. Ny ray aman-dreny izay tsy mahalala an'io dia mahazo mamatsy hanome Ratsy kely izay tena tadiaviny, ary hahatsapa ho tsara amin'izany ianao!
Betsaka ny voalavo no manana olana amin'ny fifehezana sy fihenjanana. Na dia toa manjavozavo tampoka aza ny zaza Rat, dia manana mpandinika lalina ianao. Tsy mijanona ny sain'izy ireo ary matetika io dia mitarika amin'ny fanaovana ny tendrombohitra amin'ny vovoka iray. Ny fianarana mifehy izany fironana izany dia iray amin'ireo fanamby lehibe atrehin'ny zanakao.
Ny toetra hafa eo amin'ny ankizy Rat dia misy ny fahaiza-mitarika, ny finiavana mafy, ny fahaizana miatrika ary ny fahatsapana fitantanana ara-bola matanjaka rehefa tonga ny sary matematika. Ankoatra ny hafa, Rat dia sakaiza tsy miovaova, indrindra miaraka amin'i Ox sy Dragon, izay miara-manonona olana.
Kitiho raha te hahalala bebe kokoa momba ny toetra, ny toetra, ary ny toetra mampiavaka azy ao Zaza Ratsy Zodiaka Sinoa .
Ny zaza omby dia manana singa tsy miova amin'ny rano sy ny Yin, na ny endrika vehivavy. Ny mahagaga ny omby dia ireto ankizy ireto no mijanona amin'ny làlana tsy misy dikany raha misy tantara an-tsehatra. Toa manana ny tanjaky ny olon-dehibe telo izy ireo ary manana fahatsiarovan-tena tsara.
Ny ankizy omby dia manaraka ny torolàlana mankany amin'ny T. Midika izany fa mampianatra azy ireo mialoha izay tokony hihainoany sy iza no tsy tena miezaka manampy. Na dia iharan'ny tsy rariny aza, ireo ankizy ireo dia henjana toy ny hoho ivelany, fa mety manafina ny tena fahatsapana ao anatiny.
Salama be ny omby tanora. Izy dia hitombo ho mpiasa mafy fo ary na inona na inona tetik'asa. Ny omby dia manana tanjaka sy fahaizana mijery zavatra amin'ny alalany.
Ny toetra hafa mifandraika amin'ny ankizy omby dia misy faharetana, fahamendrehana, fahamaotinana, azo ampiharina, nentin-drazana, tsara fanahy ary mahazatra. Ny ankizy omby dia matetika manintona Rat, Snake ary Rooster ho mpiara-milalao.
Kitiho raha te hahalala bebe kokoa momba ny toetra, ny toetra, ary ny toetra mampiavaka azy ao Zodiaka omby Zodiaka Sinoa .
Ny zanaka tigra Zodiac Tiger dia mitondra ny singa amin'ny hazo sy ny angovo Yang. Vonona ny olona hanao traikefa nahafinaritra miaraka amin'ity zaza ity. Tian'ireo tigra ny mahafinaritra, ny sasany amin'izy ireo dia mitondra azy ireo amin'ny rano mafana. Ny namana sy ny mpianakavy dia samy manintona ny fitiavan-tanin'i Tiger sy ny fironany hanana tononkalo momba ny fanantenana sy drafitra ho avy.
Ny tigra dia feno fahatsarana. Tsy misy zavatra tena mandehandeha ny volony. Ity zaza ity dia maniry (sy mila) fampihetseham-batana be dia be. Atleta voajanahary izy ireo ary io ezaka io dia manome fomba iray an'i Tiger handany ny sasany amin'ireo herinaratra mampientanentana azy ireo.
Tiger dia zaza be fitiavana nefa tsy misy fetra. Ity saka saka ity dia mitady ny hafa izay toa voahitsakitsaka na maratra ary mampahery azy ireo. Ka ny fanohizana dia manamafy orina ny ego Tiger salama. Rehefa tsy manamboatra an'izao tontolo izao dia tia traikefa nahafinaritra sy mivazivazy i Tiger.
Ny toetra hafa ananan'ny zaza tigra dia misy ny fahatsapana, fahasahiana, tsy faharetana, tsara fitenenana, tapa-kevitra (na mafy loha, na izy roa!), Ny fon'ny tantaram-pitiavana sy ny hafanam-po
Kitiho raha te hahalala bebe kokoa momba ny toetra, ny toetra, ary ny toetra mampiavaka azy ao Zaza Tigra Zodiaka Sinoa .
Ny zaza bitro zodiaka sinoa dia manana ny endrika Yin sy ny singa Wood. Mankato ny lesoka ity zaza ity. Azonao atao ny mitondra azy na aiza na aiza nefa tsy manahy momba karazana hatezerana. Mianatra fomba haingana izy ary mampiasa izany amin'ny fomba mandaitra.
leo lehilahy virgo vehivavy eo am-pandriana
Ny ray aman-drenin'ny bitro dia mila mahatsapa fa manana fahatsapana lalina izy ary mahatsapa adidy. Fantany izay andrasana sy oviana. Rehefa mianatra mampiasa io fahaiza-manao io izy dia afaka manetsiketsika ny ao an-trano amin'ny resaka dinamika. Raha toa ka tsy mahomby ity famonoana genius marani-tsaina ity, dia hita ho tsy dia misy dikany amin'ny endrika lehibe amin'ny zavatra.
Mahavita tsara any am-pianarana ny bitro ary mahita fa mora ny manao namana. Teraka tamin'ny vintana izy tamin'ny soniny niaraka tamin'ny diplaomasia tsy niovaova. Nahazo ny tsara indrindra niaraka tamin'ny kisoa, ny ondrilahy ary ny alika izy.
Ny mariky ny toetra iraisan'ny besinimaro an'ny mariky ny bitro dia misy ny hatsaram-panahy, famoronana, fahasoavana, fanapaha-kevitra, zava-misy, mpandinika ary fikitika ny mistery atsipy hahaliana foana.
Kitiho raha te hahalala bebe kokoa momba ny toetra, ny toetra, ary ny toetra mampiavaka azy ao Zaza bitro Zodiaka Sinoa .
Ny zaza Dragon Zodiac Chinese dia manana ny endrika Yin sy ny Element of Wood. Dragons dia tariby mivantana (araka ny mety antenainao). Mandroso hatrany i Dragon, toa tsy misy tahotra. Mahery vaika ity zaza ity, ary toa niainga taorian'ny fikaroham-pikarohana iray hafa tsy manahy momba ny Knights sendra azy.
Ny zaza Dragon dia maniry fanajana sy fahatokiana. Izy dia mitady ny olona heverina ho mahery sy mahafoy tena amin'ny tanjona manokana ho an'ny namana. Na eo aza izany, izy no voalohany miaro ny kianja filalaovana amin'ny mpamono olona. Tsy milefitra amin'ny tsy fahamarinana izy.
Ny zanaka dragona dia miroborobo amin'ny andraikitra. Mahatonga azy ireo hahatsapa ho azo itokisana sy lehibe izy ireo. Hamarino tsara fa midera azy ianao, noho ireo asa vita vita tsara ireo. Ny asany dia tso-po, na dia misy lesoka aza. Te ho tompondakan'ny fianakaviana amin'ny zavatra lehibe sy kely rehetra izy.
Ny toetra hafa fahita an'i Dragon dia misy ny tsy fanao, manintona, manintona, manavao, be resaka, manahirana ary miharihary (tena sarotra ho an'i Dragon ny manafina na inona na inona - mamaky toa ny boky ny tarehiny). Ny namana tsara ho an'ny Dragon dia Monkey, Rat and Snake.
Kitiho raha te hahalala bebe kokoa momba ny toetra, ny toetra, ary ny toetra mampiavaka azy ao Zanaky ny dragona Zodiaka Sinoa .
Ny zanaka Snake Zodiac Sinoa dia mitondra ny endrika Yin sy ny singa Afo. Miomàna, ry ray aman-dreny, zaza saro-kenatra i Snake. Manan-tsaina sy hendry izy, mandinika tsara ny saika amin'ny hetsika rehetra eo amin'ny fiainana.
Ny bibilava dia somary voatahirin'ny fihetseham-pony ary manana fironana hitebiteby be loatra. Hanana tanjona avo foana izy, saingy mila manampy amin'ny famoronana drafitra hahombiazana ianao. Ny zaza Snake dia mety ho lasa mpitondra tena mahay satria azony ny lafiny rehetra amin'ny fampitahana. Miaraka amin'ny talenta voajanahary miavaka, ny olona dia mitady an'i Snake ho namana.
Toy ny natiora, ny ankizy bibilava mandatsaka ny hodiny tsindraindray ary tonga vaovao. Mety ho kely na lehibe ny fanovana, saingy ho avy izany. Ny ray aman-dreny dia tokony ho vonona handray ireo fanovana ireo ary hampifanaraka ny fahaizany mitaiza mifanaraka amin'izany.
Ny teny manan-danja natokana ho an'ny olom-bitan'ny bibilava dia misy mistery, mora vidy, voajanahary, malina saina, milamina, ampinga ary mahaleo tena. Ny namana ho an'ny bibilava dia misy ny Rooster sy ny omby, ary ny zanak'olo-mpiray tam-po amin'i Snake - Dragon.
Kitiho raha te hahalala bebe kokoa momba ny toetra, ny toetra, ary ny toetra mampiavaka azy ao Zaza Snake Zodiaka Sinoa .
Ny zaza teraka tamin'ny taonan'ny Soavaly dia manana ny endrika Yang sy ny Toetran'ny Afo. Mandehandeha hatrany ny soavaly mitady traikefa nahafinaritra vaovao. Izy dia manana fihetsika tena manaitra sy fitiavana ny olom-pirenenan'i Natiora. Mety ho hitan'ny ray aman-dreny fa manana olana amin'ny manjaka amin'ny soavaly indrindra izy rehefa tsy mahazo ny làlany.
Miaraka amin'ny ankohonany sy ny namana dia mampiala voly ny soavaly. Mandroso amin'ny marika an-tanety aloha izy noho ny ankamaroan'ny ankizy. Izy koa dia manana toetra tsy mitongilana izay afaka mamandrika ireo namana amin'ny endriny marefo miaraka amin'ny fiafarana mampiahiahy.
Ny ankizy mpitaingin-tsoavaly dia mpamaha olana hatrany izay mametraka ny fanontaniana hoe 'ahoana no fomba fanamboarako azy?'. Tsy iray ho an'ny fahasarotana, ny soavaly dia mametraka ny fanontaniana rehetra amin'ny vahaolana tsotra indrindra. Azonao atao ny matoky ny fisainan'ny zanakao soavaly (diniho manokana ny fandraisan'izy ireo olona vaovao amin'ny fianakaviananao).
Ny toetra mampiavaka ny soavaly dia misy ny capriciousness, manintona, mahery vaika, malala-tsaina, matoky tena, mahamenatra, tsy mahazatra ary atletisma. Ny namana tsara indrindra ho an'ny soavaly dia ny tigra sy alika.
Kitiho raha te hahalala bebe kokoa momba ny toetra, ny toetra, ary ny toetra mampiavaka azy ao Ankizy Soavaly Zodiaka Sinoa .
Ny zaza Zodiac Sheep dia anjely mamy sy malefaka. Tian'izy ireo ny tsara indrindra ho an'ny zava-manan'aina rehetra. Raha ny marina dia malemy fanahy izy ireo ka mety hahatsapa fiaraha-miory amin'ny vatolampy voadaka. Mahita hatsaran-tarehy eny rehetra eny ny zanakao ary mizara malalaka izany fahitana izany. Raha ny marina dia ampahany amin'ny olana ho an'ny Ondry ny fahitany faharatsiana ihany koa ary tsy azony antoka ny fomba fikirakirana izany.
Mpanaraka ny ondry. Tian'izy ireo ny olona hafa tompon'andraikitra. Mahasarika olona ny fahalemeny misokatra, ary soa ihany fa tsy mpampiasa ny ankamaroany. Tena ny hetahetan'ny ondry rehetra dia ny fanekena tsy misy fiandrasana adin-tsaina sy fahatsapana filaminana.
Amin'ny maha ray aman-dreny anao dia zava-dehibe ny fampitomboana ny fahaizanao miresaka momba ilay ondry tena mora tohina. Ny teny mahery amin'ny fotoana tsy mety dia mitomany mandritra ny ora maro na fihemorana tanteraka amin'ny fanangonana volon'ondry. Ity fialan-tsasatra ity dia miaro ny ondry amin'ny tontolo masiaka matetika. Raha mbola misy ny fototra iorenan'ny fiainana dia mahatsiaro ao an-trano ny ondry.
Ny toetra fahita amin'ny zaza ondry dia misy fangorahana, filaminana, fitiavana, famelan-keloka, fahaiza-mamorona, fahitsiana, fahanginana, fahalemem-panahy ary asa soa. Ny mpiara-miasa tsara sy miaro ny zanakao dia misy ny tigra, ny kisoa ary ny soavaly.
Kitiho raha te hahalala bebe kokoa momba ny toetra, ny toetra, ary ny toetra mampiavaka azy ao Zanak'ondry Zodiac Sinoa .
Ankizy Zodiac Monkey Shinoa dia mitondra ny lafiny Yang sy ny Element of Metal. Fantatrao ve ilay andian-teny taloha hoe 'mamiratra ny gidro'? Eny, zatra fahazarana be fikasana tsara amin'ity zaza ity. Monkey dia mpamitaka ary manana faharanitan-tsaina hamolavola tetika lehibe. Tiany ny fanamby tsara ary mikasa ny hahomby amin'ny zavatra rehetra raisiny izy.
Ny zaza rajako dia mifantoka amin'ny tanjona. Manampy be izany rehefa mamporisika azy ireo hamita ny asany ao an-trano. Aza hadino ny manome dera an'i Monkey noho ireo asa vita tsara ireo. Feno fahasambarana izy ary ny tsiky tsy dia lehibe loatra tadiavinao.
Ny ray aman-drenin'ny gidro dia mety ho reraka ny heriny. Sarotra aminy ny mipetraka mangina ary tsy mitsahatra mametraka fanontaniana. Tokony hanao tsara any an-tsekoly izy satria avo lenta amin'ny lisitry ny tanjon'i Monkey ny fanatsarana tena. Aza adino izany, izany wit izany dia mety haneho ny tenany ho toy ny kilasy kilasy, fa Monkey dia mahafatifaty toa tsy misy mieritreritra.
Ny toetra mahazatra zarain'ny zaza rajoa dia ny fahakingan-tsaina, ny zava-misy, ny fahakingan-tsaina, ny fahalianana, ny tetikady, ny fahaiza-miasa, ny fahasamihafana, ny vintana ary ny fifaliana Ny namana tsara indrindra ho an'ny Monkey dia Dragon sy Rat, izay samy afaka manaraka ny heviny vaovao.
Kitiho raha te hahalala bebe kokoa momba ny toetra, ny toetra, ary ny toetra mampiavaka azy ao Zaza Monkey Zodiac Sinoa .
Ny olona akoholahy dia mihoapampana ary tia izay zavatra misarika azy ireo.
Ny zanaky ny Zodiac Rooster sinoa dia manana ny endrika Yin sy ny Metal Element. Ny akoho lahy dia be vava momba ny heviny, na toy inona na toy inona fahitan'ny hafa azy ireo. Ny Rooster dia manonofy lehibe ary tsy matahotra ny hametraka ny drafitra asa tsara indrindra hahazoana izay tadiaviny. Ray aman-dreny: Rooster kely tsy mahalala tahotra ka miomàna miaraka amin'ireo vonjy taitra maika.
Hatramin'ny fahazazany dia mafy loha ny Rooster, indrindra rehefa miaiky ny tsy mety na ny lesoka. Te hamirapiratra toy ny masoandro miarahaba azy isa-maraina izy, mankalaza izany amin'ny alikaola mirehareha. Ho setrin'izany, ny Rooster dia matetika mahazo ny atiny afovoany izay tian'izy ireo. Ny maha-ivon'ny fiheverana dia mifanaraka amin'ny Rooster.
Na eo aza ny bluster rehetra dia sakaiza efa nanandrana sy tena izy. Toy ny soavaly taloha dia mitaingina hamonjy ny toe-javatra amin'ny foto-kevitra sy finiavana mahery vaika izy. Matetika dia mandaitra ireo ezaka ireo. Tsy misy zavatra tsy takatry ny Rooster rehefa manao iraka izy ireo.
Ny toetra amam-panahy zarain'ny ankizy Rooster dia misy ny hatsikana, fahatsiarovan-tena, fahazotoana, fitsitsiana, tsara fanahy, manaitaitra, milamina ary mifampiresaka. Ny omby sy ny menarana dia ataovy namana tsara ho an'ny Rooster kelinao.
Kitiho raha te hahalala bebe kokoa momba ny toetra, ny toetra, ary ny toetra mampiavaka azy ao Zaza Rooster Zodiaka Sinoa .
Araka ny mety antenainao, ny ankizy alika dia tena mitovy amin'ny namany saka. Izy ireo dia mahafinaritra, sariaka, mahatoky ary be fandavan-tena. Ny alika dia maha-olombelona voajanahary hatramin'ny dingana voalohany alohan'izy ireo mandroso. Te hanompo sy hanampy izy ireo ary manome fitiavana sy fanampiana nefa tsy mieritreritra ny hamerina izany.
Mety manahy ny amin'ny alika kely indrindra ny alika. Fantatrao ny fitomanian'ny alikanao na dia lasa minitra vitsy monja aza ianao? Izany karazana tsy fahatokisana izany dia manodidina ny Ankizy Alika. Ny ray aman-dreny dia afaka manampy amin'ny fampahalalana amin'ny zanany fa tiany izy ireo, ankasitrahana ary milamina ny tranony.
Ny lalao ara-drariny dia eo amin'ny làlan'i Dog. Mino ny fahamarinana ity zaza ity ary tokony samy hanadio ny olon-drehetra raha mikorontana. Izany dia faharesen-dahatra matanjaka ao amin'ny Dog ary iray izay matetika no iharan'ny fahadisoam-panantenana. Ento ny zanakalahinao kely mba hahafantaran'izy ireo fa tsy tompon'andraikitra matetika toa azy ny olona.
Ny toetra miavaka hafa amin'ny zaza Alika dia misy ny fahamarinana, marina, mahatsikaiky, fitondran-tena matanjaka, tsara fanahy, miteny, mamorona ary mamela heloka tokoa. Ireo mpiara-miasa teraka tamin'ny taonan'ny Soavaly, Bitro na Tigra dia manao namana tsara ho an'ity zaza ity.
Kitiho raha te hahalala bebe kokoa momba ny toetra, ny toetra, ary ny toetra mampiavaka azy ao Zaza Alika Zodiaka Sinoa .
Zaza kisoa / kisoa sinoa
Ny zaza teraka tamin'ny taona Pig dia manana ny endrika Yin sy ny singa ao anaty rano. Ity zaza ity dia zavaboary ara-tsosialy be izay ankafizin'ny tsirairay. Ny Piglet dia mazoto, be herim-po ary maharitra amin'ny zavatra rehetra ataony. Tiany ny miasa tahaka ny milalao, ary rehefa mihalehibe izy dia mety hampivelatra ny bibikely mandeha.
Rehefa milavo lefona ny hafa dia mitohy matanjaka. Amin'ny maha-ray aman-dreny anao dia ho hitanao fa mandray tsara ny lalana ny zanakao. Raha vao tratra ny tanjona dia tokony hoderaina ary hamporisihana ny fitondran-tena mitovy amin'izany. Izany dia mihaona am-pitiavana lehibe izay toa tsy misy farany. Ankafizo ny fifamihinana!
Indraindray ilay zana-kisoa dia mahatsiaro ho antitra kokoa amin'ny fomba ifikirany amin'ny zavatra inoany sy fampanantenany. Tsy misy toerana ho an'ny famitahana amin'ny tontolon'ny kisoa, midika izany fa tsy maintsy mitifitra avy amin'ny valahana i Neny sy i Dada. Omeo ny zanakao ny fahamarinana amin'ny fitiavana ary hanana fifandraisana matanjaka mandritra ny fiainana ianao.
Amin'ny ankapobeny, azonao atao ny miantehitra amin'ny ankizy kisoa mba hijanona ho tsotra, matanjaka, mandamina, be fitiavana, manam-paharetana ary ilay 'lehilahy tsara' amin'ny ankapobeny. Ny sakaiza tsara indrindra ho an'ny Kisoa dia ny Rabbit sy Sheep.
Kitiho raha te hahalala bebe kokoa momba ny toetra, ny toetra, ary ny toetra mampiavaka azy ao Zaza kisoa Zodiaka Sinoa .
Ny Symbolism sy ny dikany amin'ireo singa dimy
Hevitra sy tandindona amin'ny tsilo
TORITENY DREAM C - Simban'ny nofy sy dikany amin'ny nofy
Zanaka Aquarius: Toetra, toetra sy toetra mampiavaka azy
Ilay vehivavy libra ny toetrany sy ny toetrany amin'ny fitiavana, fampifanarahana ary fiainana
fifandraisan'ny lahy sy ny vavy capricorn
sagittarius lehilahy sagittarius vehivavy tia mifanentana
vehivavy scorpio sy lehilahy homamiadana manao firaisana
toerana misy ny planeta ankehitriny amin'ny rafi-masoandro